Mid Ka Mid Ah Dalalka Yurub Oo Waaran Qabasho Ah U Jaray Ra’isal Wasaaraha Isreal Iyo Saraakiil Kale |
Mid Ka Mid Ah Dalalka Yurub Oo Waaran Qabasho Ah U Jaray Ra’isal Wasaaraha Isreal Iyo Saraakiil Kale
Ra’isal Wasaaraha Isreal Benjamin Netanyahu iyo todoba sarkaal oo isugu jira kuwo hore iyo kuwo hadda xilal haya ayaa khatar ugu jira in la xidho, hadiiba ay cagta dhigaan dalka Spain, ka dib markii uu waaran qabasho ah u soo jaray xaakin maxakamadeed.
Sida lagu baahiyay wargeyska ka soo baxa wadamada laatiinka ee American Herald Tribune, xaakinka guud ee dalka Spain Jose de la Mata ayaa ciidamadda booliska ee dalkaasi waxa uu amar ku siiyay in xabsiga dhigaan Ra’isal Wasaaraha Isreal iyo saraakiishaasi kale hadiiba ay dhacdo in ay soo galaan dalka Spain.
Saraakiishan ayaa loo haystaa xasuuq dhacay 2010, waxaanay ay khatar ugu jiraan in xabsiga loo taxaabo.
Saraakiisha kale ee maxakamaddu amartay in la xidho ayaa kala ah wasiirkii hore ee gaashaandhiga isreal Ehud Barak, Wasiirka arrimaha Dibadda Avigdor Leiberman, Wasiirkii hore ee qorshaha Moshe Yaalon, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Eli Yishai iyo xubno kale.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Isreal Oo lagu magacaabo Emmanuel Nachshon ayyaa u sheegay Wargeys ka soo baxa Isreal in ay xukuumadda Spain kala hadli doonaan sidii loo joojin lahaa xukunkaasi